सुगर रोगबारे यस्ता छन् भ्रमहरु ! यस्तो गर्नुभयो भने सुगर नियन्त्रण भैहाल्छ, यस्तो छ डाक्टर को सुझाव | Online Raftar सुगर रोगबारे यस्ता छन् भ्रमहरु ! यस्तो गर्नुभयो भने सुगर नियन्त्रण भैहाल्छ, यस्तो छ डाक्टर को सुझाव | Online Raftar
सुगर रोगबारे यस्ता छन् भ्रमहरु ! यस्तो गर्नुभयो भने सुगर नियन्त्रण भैहाल्छ, यस्तो छ डाक्टर को सुझाव
अनलाइन रफ्तार 6:31 am मा प्रकाशित
जसबारे हामी जानकारी दिन गइरहेका छौं । जसले तपाईको चाहना र मधुमेहको जोखिमलाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ । भ्रमः सुगर फ्रि बिस्कुट, ओट्स, कर्नफ्लेक्स, आदि मधुमेह रोगीका लागि राम्रो हुन्छ ।
यर्थातः यी वस्तु पनि अन्नबाटै बनेको हुनाले कार्बोहाईड्रेटको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसैले यस्ता वस्तुहरु पनि कम या अनुपात मिलाएर सलाद र तरकारीहरु राखेर खान सकिन्छ ।
भ्रमः सधै खाने चामलबाहेक अन्य अन्न जस्तै रोटी, उसिना चामल जति खाए पनि हुन्छ । यर्थातः सबै अन्नमा लगभग उस्तै मात्रामा कार्बोहाईड्रेट पाईने भएकाले जुन अन्न खाए पनि उही अनुपातमा खानुहोस् अर्थात् अन्नभन्दा तरकारी बढी खानुपर्छ ।
भ्रमः चामललाई धेरैपटक पखालेर माड फालेर कार्बोहाईड्रेट नष्ट हुन्छ । यर्थातः चामललाई धेरैपटक पखालेर माड फाले पछि कार्बोहाईड्रेट नष्ट हुनुको साटो पानीमा घुलनशिल भिटामिन नष्ट हुन्छ ।